Guddoomiyaha baarlamaanka DFS Maxamed Sh.Cismaan Jawaari oo u dhoofay dalka Itoobiya
Guddoomiyaha baarlamaanka DFS Maxamed Sh.Cismaan Jawaari iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta waxaa ay safar ku gaareen magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya. Guddoomiyaha baar lamaan ka Dowllada Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Sh. Cismaan jawaari oo la hadlay saxaafada inta uusan ka dhoofin garoonka Aadan cadde ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu saxaafada u sheegay in casumaad uu ka hellay dhiggiisa dalka Itoobiya ayna ka wada hadli doonaa xiriirka ka dhexeeya 2-da dal iyo in la sii adkeeyo xiriirka ka dhexeeya 2-da dowlladood.
Guddoomiyaha baarlamaanka Dowllada Federaalka ee Somaaliya Maxamed Sh. Cismaan jawaari ayaa waxaa kale oo xusay in u jeedadad safarkoodu uu yahay siddii la isku dhaaf san lahaan khibrada iyo aqoonta dhinac sharciga ee Golahaasha Baarlamaanka ee 2-da dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya.
Guddoomiyaha baarlamaanka Dowllada Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan jawaari ayaa waxaa safarkiisa ku weheliya xubno ka tirsan guddi hoosaadyada Golaha Baarlamaanka ee Dowllada Federaalka Soomaaliya.
Ma ah markii ugu horaysay oo masuul ka tirsan Dowllada Federaalka Soomaaliya uu safar ku gaaro dalka Itoobiya ,Madaxweynaha DFS Xassan Sheekh Maxamuud ayaa ilaa 2-bo jeer safar ku tegay dalka Itoobiya isagoo kulamo kala duwan la soo qaatay Madaxda Dowllada Itoobiya.